महतोद्वारा किरियापुत्री भवन हस्तान्तरण | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← मुन्नी बद्नाम हुई, डार्लिङ तेरे लिएमा नृत्य
महिलाहरुले ढाट्ने पाँच कुरा ! →
महतोद्वारा किरियापुत्री भवन हस्तान्तरण
Posted on 13/10/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, २४ असोज, फूलकुमारी महतो ट्रष्टले दोस्रो चरणको काम पूरा गरी किरियापुत्री भवन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ट्रष्टका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । डा. महतोले आफ्नी आमा फूलकुमारी महतोको सम्झनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको करिब १४ रोपनी जग्गामा किरिया पुत्री भवन निर्माण गरेका हुन् । मंगलबार ट्रष्टले १९ कोठा निर्माण गरी कोषलाई हस्तान्तरण गरेको हो । २०६६ फागुन १४ मा शिलन्यास भएको यो भवनको पहिलो चरणमा १४ कोठा निर्माण गरी फूलकुमारी महतो ट्रष्टले कोषलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा ट्रष्टका अध्यक्ष महतोले समृद्ध नेपाल बनाउन सबै नेपाली जुट्नुपर्ने भन्दै विकास गरेपछि संविधान बन्न कुनै कठिनाइ नभएको बताए । ट्रष्टले तेस्रो चरणमा आर्यघाट क्षेत्रमा रहेका पार्टीपौवालाई जीर्णोद्धार गर्नेछ ।
संघीय मामिला, संविधान सभा तथा संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले डा. महतोलाई लगानी विद्युतीय गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १० वर्षे गुरुयोजना अलपत्र परेकाले गैरआवासीय नेपालीहरूको सहयोग चाहिने मन्त्री किराँतीले बताए । गैरआवासीय नेपालीको ध्यान केन्द्रित भएमा यस क्षेत्रको विकास गर्न सहज हुने उनले बताए । ३० लाख नेपालीको नेटवर्क भएको संघले देश विकासका लागि धेरै गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै संघले नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य निकायसँग मिलेर नेटवर्कलाई दरिलो बनाउने बताएको छ ।
भवनका आर्किटेक्ट निरुमान शाक्यले सानो ठाउँका बावजुद पनि प्रयास अगाडि बढाएको बताए । भवन निर्माणपछि पशुपति क्षेत्रमा फैलिएको फोहोरसमेत व्यवस्थापन भएको उनको अनुभव छ । किरियापुत्री भवन कुनै पनि दिन खाली नभएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
देश बनाउनका लागि मनभित्रैबाट सहयोग गर्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष जीवा लामिछानेले बताए । ३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्मित किरियापुत्री भवनमा धनी–गरिब तथा सबैले समान तहमा उपभोग गर्नेछन् । पशुपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्थल र पशुपतिको आर्थिक आयव्यय पारदर्शी बनाउन पनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन । सोही कार्यक्रममा हरिभक्त सिग्देलद्वारा लिखित ४ वटा पुस्तकसमेत विमोचन गरिएको छ ।